BIB waa nooca ugu fiican ee baakadaha biyaha la cabbo
Baakadaha-ku-jira sanduuqa, oo loo yaqaan baakada BIB, ayaa ah nooca ugu guulaha badan baakadaha sanadihii ugu dambeeyay baakadaha hal-abuurka caalamiga ah, sababtuna waa nabadgelyadiisa, nadaafaddiisa, ku habboonaantiisa, astaamaha deegaanka, horumarka degdegga ah ee Yurub iyo Ameerika ...
Bacda ku jirta suuqa baakadaha sanduuqa waa caan, faa'iidooyin ammaan ah oo habboon
Cuntada dadku waa maalinta, cuntada badbaadada marka hore. Warshadaha baakadaha ayaa sii wada inay horumariyaan xilligan, dadku waxay si isa soo taraysa uga walaacsan yihiin badbaadada iyo ku habboonaanta baakadaha. Haddaba waa maxay waxyaabaha saamayn doona badbaadada baakadaha cuntada? Qalabka baakaduhu waa ...
Waa maxay bacda ku jirta baakadka sanduuqa?
Maxay Qaramada Midoobay u leedahay xeerar ku saabsan baakadaha? Qaramada Midoobay waxay dejisay heerar lagu kala saaro, baakadeynta, calaamadeynta iyo calaamadeynta badeecadaha halista ah, oo ay ku jiraan waddada, tareenka iyo badeecadaha halista ah ee badda. Heerarkan si taxaddar leh ayaa loo habeeyay si loogu daro standa ...
Gacan ka hadal ku saabsan rajada horumarinta warshadaha baakadaha dabacsan ee Shiinaha
In kasta oo baakadaha dabacsan ee dareeraha ah ay soo galeen Shiinaha 1970 -yadii, haddana si weyn uma aysan adeegsan macaamiisha Shiinaha iyo warshadaha la xiriira. Laakiin Yurub dhexdeeda, baakadaha dabacsan ee dareeraha ah ayaa noqday mid aad loo jecel yahay. Xukunka shaqsiyeed, tani waxay wax ku lahaan kartaa dhaqanka iyo caadooyinka fikirka ee ...
Waa maxay dhalaale
Cubitainer LDPE waa cube caag ah oo adag, ama kaadiheysta, kaas oo ah mid adag haddana dabacsan oo si sahlan loo maareeyo. Cubitainer waa mid waara oo ku filan in kaligeed la isticmaalo laakiin waxaa kaloo laga yaabaa in loo isticmaalo kartoon dibadda ah oo jiingad ah si loo abuuro xirmo adag oo ku dhawaad ​​aan burburin karin. Waxay leedahay dhamaystir qoorta oo la soo galiyay si aan ...
Baakadaha weelka dareeraha ah ee gacmo -nadiifiye saabuun
Labadaba LDPE cubitainer iyo boorsooyinka toosan ayaa caan ku ah buuxinta gacmo nadiifiye. Baakadaha weelka dareeraha ah ee gacmo -nadiifiye saabuun ayaa buuxiya shuruudaha FDA iyo dhammaan alaabta ceyriinka ah taas oo ka dhigaysa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay kaydinta biyaha iyo fursado kale oo badan. Weelasha iyo sanduuqyada waa als ...
LDPE cubitainer 5 litir oo ay wehel u tahay jel ultrasound caafimaad
Kitaabadeena LDPE ayaa caan ku ah buuxinta jel ultrasound caafimaad. Macaamiisha ayaa sida caadiga ah doorta saqaf si ay u soo saaraan jelka. Kitaab -gacmeedka LDPE oo leh baakad loogu talagalay gel gel ultrasound -ka caafimaad ayaa buuxiya shuruudaha FDA iyo dhammaan alaabta ceyriinka ah ee ka dhigta iyaga ikhtiyaar weyn oo kaydinta biyaha a ...
Bacaha baako ee jeermis -dilaha aashitada hypochlorous
Saameyn ku yeelatay COVID-19, waxaa jira baahi sii kordheysa oo loo qabo alaabta bakteeriyada sida jeermis-dilaha iyo aalkolada. Laga bilaabo bilowga sannadka 2020, mashiinnadayagu waxay u shaqeeyaan 24 saacadood maalin kasta suuqa ee jeermis -dilaha aashitada hypochlorous iyo aalkolada. Waxaan u direynaa in ka badan 100000 kumbiyuutarada bacaha la t ...